အမှတ်နည်းသောအမှတ်များဖြင့်အနိုင်ရခြင်းသည်မှန်ပါသလား။ • musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း အားကစား အမှတ်နည်းပြီးအနိုင်ရတာမှန်သလား။
စက်တင်ဘာ 4, 2021
ဘယ်သူပိုဂိုးပိုသွင်းနိုင်ပါစေ၊ သူ့ခြေ၊ လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကလပ်အသင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ရမှတ်ကိုရသူဘယ်သူမဆိုအချိန်တိုကိုအဆုံးအနိုင်ရလိမ့်မယ်။
အနုပညာအများစုနှင့်ယှဉ်လျှင်အနည်းဆုံးအားကစားနည်းပင်ဖြစ်သည် အနုပညာကျွမ်းဘား၊ ရေငုပ် (သို့) ပုံစကိတ်စီးခြင်း သူတို့ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရေးဆွဲဖို့အတွက်နံပါတ်တွေရဲ့အာဏာကိုအားကိုးဖို့ဖိအားပေးခံရတယ်၊ ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံဘဲရှိရှိပကတိစံနှုန်းတစ်ခုဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
နံပါတ်သည်၎င်းကိုဂရုမစိုက်ပါ ဘယ်လို ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာ အဖြစ်မင်းကမင်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖို့ရှိတယ်၊ မင်းကအနိုင်ရခဲ့ရင်၊ မင်းရှုံးရင်ဒါမှမဟုတ်ရပ်တည်မှုမှာမင်းရဲ့အနေအထားကိုပြောဖို့၊ သူကအဲဒီမှာရှိနေတယ်။
ထို့ကြောင့်၎င်းနံပါတ်သည်အလွန်သန့်ရှင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေး (သို့) မျက်ကွယ်ပြုထားသောနတ်ဘုရားမကြီး၏လက်မှလာခြင်းမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ သာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းသက်သေပြစရာမလိုဘဲအနိုင်ရပါ.
သို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုအသုံးမ ၀ င်ပါ၊ ကောင်းမွန်သောသင်္ချာဥပဒေပင်မအောင်မြင်သောအားကစားများရှိသည်။ ဤကစားနည်းများ (ဘော်လီဘော၊ တင်းနစ်နှင့်စားပွဲတင်တင်းနစ်ကဲ့သို့) တွင်ပြင်းထန်သောစိတ်ထားသည်ပြိုင်ဘက်နှစ် ဦး ၏အမှတ်များကိုရေတွက်ရန်မဟုတ်ဘဲပွဲစဉ်များကိုခွဲရန် (တင်းနစ်၌ပင်ခွဲထားသည်) ဂိမ်းရှိအစုံ။ )
ထို့ကြောင့်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ အမှတ်အများဆုံး (သို့မဟုတ်ဂိမ်း) ကိုအနိုင်ရသူသည်အစုကိုအနိုင်ရပြီးအစုံအများဆုံးအနိုင်ရသူသည်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရသော်လည်း၎င်းသည်အလုံးစုံလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းအနိုင်ရခြင်းကိုမကာကွယ်နိုင်ပါ။ ပြိုင်ဘက်ထက်အမှတ်နည်းသည်.
အများအားဖြင့်ရှုံးနိမ့်သူသည်ပြဇာတ်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်လွယ်လွယ်ကူကူအနိုင်ရခဲ့ပြီးကြိုးအနည်းငယ်တွင်ရှုံးနိမ့်သွားခြင်း၊ ပြိုင်ဘက်အားသိသိသာသာအားရပါးရအားပေးခြင်းနှင့်ကစားနည်းသည်အလွယ်တကူသိနိုင်ခြင်းတို့ကပိုမိုအကျိုးရှိသော ဦး တည်ချက်ကိုရစေခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပွဲတစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပေးဖို့ကတရားမျှတပါတယ် ပြိုင်ဘက်ထက်အမှတ်နည်းသည်? ကစားသမားတစ် ဦး (သို့) အသင်းတစ်သင်းသည်အခြားတစ် ဦး ထက်သာလွန် နေ၍ ၎င်းအားသင်္ချာကြမ်းတစ်ကြောင်းလုံးကမှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင်၎င်းကိုမည်သို့အတည်ပြုနိုင်မည်နည်း။
အလွန်အကျွံကုသိုလ်မယူဘဲ၊ သင်ကပြိုင်ဘက်ထက်အမှတ်ပိုရသည့်အောင်ပွဲကိုလက်ခံရန်ရိုးရှင်းပုံရသော်လည်းအဆုံး၌၎င်းသည်ဂိမ်းအတွင်းအမှတ်များခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရမှတ်စုစုပေါင်းထက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရေတွက်သည်။
အမှတ်နည်းပြီးအနိုင်ယူခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာသည် Wimbledon ဖိုင်နယ် ၂၀၁၉မရ။ Federer သည်အမှတ်အများဆုံး (၂၁၈ မှ ၂၀၄၊ စုစုပေါင်း ၅၁.၇%) နှင့်ပွဲအများဆုံး (၃၆ မှ ၃၂) ဂျိုကိုဗစ် ယေဘူယျအားဖြင့်သူကစာရင်းအင်းအချက်အလတ်အားလုံးမှာရှေ့တန်းက ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်ပေမယ့်အဲဒါကဆုဖလားကိုအိမ်ကိုယူတဲ့ဆားဗီးယားလူမျိုးပါ။
Federer ၀ န်ဆောင်မှု၌ပဉ္စမမြောက်ဆယ့်ခြောက်ပွဲတွင်ဆယ့်ခြောက်ပွဲတွင်နှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရသောစွမ်းရည်ကိုအနိုင်ယူရန်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားပြီး၎င်းကိုကျေးဇူးတင်သည်။ နောက်ဆုံးအချက် ၎င်းသည်စာရင်းဇယားနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်ဆွစ်ဇာလန်သည်သူ၏အနိုင်ရမှတ် ၆၈.၅% ကို ယူ၍ လန်ဒန်မြက်ခင်းပေါ်၌နဝမမြောက်ချန်ပီယံဆုကိုဆွတ်ခူးနိုင်သည့်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသည်ဂျိုကိုဗစ်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ကြောင်းပြသသည်။ ပွဲစဉ်၏အဓိကအကြောင်းအရာများအဆင့် (သို့မဟုတ်သင် Federer ၏ကျဆင်းမှုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်သက်လျှင်)
မှတ်ဉာဏ်၌အမိုက်ဆုံးဥပမာသည်ကွာတားဖိုင်နယ်ဖြစ်သည် တိုကျိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအမျိုးသားဘော်လီဘော အီတလီနှင့်အာဂျင်တီးနားကြား
စက္ကူအနည်းငယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော Azzurri သည်ပထမအချီ (၂၅-၂၁) ကိုအနိုင်ယူပြီးဒုတိယအချီကြီးများကို ဦး ဆောင်သော်လည်းဖိုင်နယ် (၂၃-၂၅) တွင်ရလဒ်ကောင်းရရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်တတိယအစပိုင်း (၂၂-၂၅) တွင်လည်းရှုံးသည်။ ဒါပေမယ့်စတုတ္ထအစုံ (၂၅-၁၄) ကပွဲကိုအနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာအီတလီကပိုကောင်းလာပြီးအစအဆုံးသုံးပုံနှစ်ပုံအထိ ဦး ဆောင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အာဂျင်တီးနားကအဆုံးအဖြတ် ၇ မှတ်နဲ့အစုံ (၁၂-၁၅) နဲ့ကစားတယ်။ စုစုပေါင်းသည်အီတလီသည် albiceleste ၁၀၀ ကို ၁၀၇ မှတ် (ဤကိစ္စတွင်အဆိုးဝါးဆုံး ၅၁.၇%) ဟုဆိုသော်လည်း semifinal ၏တံခါးများနှင့် သမိုင်းကြေး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သူတို့ကအာဂျင်တီးနားအတွက်ဖွင့်တယ်။
ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်၊ ဂိမ်းအားခဏလေးနှင့်အမှတ်အားလုံး၏လက်တစ်ဆုပ်စာကဆုံးဖြတ်သည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်းမျှတသည်။ အထူးသဖြင့်ပဉ္စမအချီတွင်အာဂျင်တီးနားသည်အထူးသဖြင့်ထိုးဖောက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အဖိုးတန်သောကာကွယ်မှုနှစ်ခုဖြင့်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်၊ အီတလီသည်ကြည့်ရန်အနည်းငယ်ကျန်နေသေးပြီး၎င်းသည်တောင်အမေရိကတိုက်၏အကြေးခွံများကိုထိုးဖောက်ရန်လုံလောက်သည်။ မရ။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပင်လျှင်ထင်ရှားသည် လာ, ဤအားကစားများတွင်အခြားအရာအားလုံးထက်ပိုသည် quando.
ပွဲစဉ်၏အရေးကြီးအဆင့်များတွင်သာလွန်ခြင်းမှာသေချာပေါက်အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အားကစားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွင်းကျရောက်သည့်အပြင်ပြီးပြည့်စုံရန်နည်းပညာလက်ဟန်ကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိခြင်း (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောက်ပစေခြင်း။ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ယောက်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောတေးဂီတကိုအကောင်းဆုံးထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရမှတ်ခွဲရဲ့အမှတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးမှန်ကန်စွာဆုချတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ထိုအဆုံးအဖြတ်အခိုက်အတန့်များတွင်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကိုမြင်သူများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အပြစ်တင်သည် ပိုပြီးရိုးစင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုရိုက်နှက်တယ်.
မင်းက ၄၀-၀ မှာကစားခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့တုံ့ပြန်မှုကမင်းမှာဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ အခြေအနေကဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်အံ့ although စရာကောင်းပေမယ့်၊ မင်းကအဆုံးအဖြတ်ကိုချိုးပေးရင်တောင်ပိုတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးလား။ ထို့ကြောင့်ပင်အလှတရားသည်ယခုအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားသည်.
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမင်းအဲဒါကိုတန်ဖိုးထားတာမှန်တယ် ရမှတ်တောင်မရ။ အခြေခံအားဖြင့်ငါတို့ကစားတာ၊ ကစားတာကိုကြည့်ပြီးအားကစားရဲ့အဆုံးကိုရက်ရက်စက်စက်ထည့်တွက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ပွဲရဲ့အဆုံးမှာရက်စက်တဲ့အရေတွက်ကိုမထည့်ဖို့။
ဆောင်းပါး အမှတ်နည်းပြီးအနိုင်ရတာမှန်သလား။ မှ အားကစားများမွေးဖွားလာသည်.
နောက်ဆောင်းပါးBarba Palvin သည် Venice ၌စွဲမက်သည်
3 ကျောင်း၊ ရုံး / အပန်းဖြေမှုအတွက်လွယ်ကူပြီးလျင်မြန်စွာသောပုံစံများ
ဒီဇင်ဘာလ 31, 2020
နိုဝင်ဘာ 17, 2020